အသစ်တဖန် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချ သည့် ကြေညာ စာတမ်း မဂ်ျမ မှ ထုတ်ပြန်
September 7, 2017 - 11:51 PM News Code : 852946 Source : ABNA Link:
အသစ်တဖန် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချ သည့် ကြေညာ စာတမ်း တစ်စောင်အား မဂ်ျမ ယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ ဘိုက်(သ) (အ.စ) မှ ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် ဤ ပြဿနာအခက်အခဲအကြပ်အတည်း အား ဖြေရှင်း နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရှိရပါတယ်။
အသစ်တဖန် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချ သည့် ကြေညာ စာတမ်းတစ်စောင်အား မဂ်ျမ ယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ ဘိုက်(သ) (အ.စ) မှ ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် ဤ ပြဿနာအခက်အခဲအကြပ်အတည်း အား ဖြေရှင်း နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရှိရပါတယ်။
ဤကြေညာစာတမ်းတွင်အချို့ အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်မှာ အဖိနှိပ် အရက်စက်ခံရှိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်မ်များ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၊မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုသည့် အကြောင်းပြချက် ဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာ အဖိနှိပ်အရက်စက်ခံ နေရပြီး ရာဇာဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းခဲ့နေရကြောင်း ဤရာဇဝတ်မှုကို ကျူးလွန်ရာတွင် အစွန်းရောက် စစ်သွေး ကြွ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်အတူ စစ်တပ် နှင့် မြန်မာ အစိုးရ မှလည်း ပူးပေါင်း ကူညီခဲ့ကြောင်း ၊ ဤအတွက် မဇ်လူးမ်(အရက်စက်အဖိနှိပ်ခံ) မွတ်စလင်မ်များ အသတ် အဖြတ်ခံရကြောင်း မွတ်စလင်မ်များ ၏ အိမ်များ ၊ဗလီဝတ် ကျောင်းတော်များ ၊ ဈေးဆိုင်များ မီးရှို့ အဖျက်စီးခံရကြောင်း ထူးဆန်းသည့် အကြမ်းဖက် ရက်စက် လူမဆန်မှုများ နှင့်အတူ နေအိမ်များ မှ မောင်းထုတ်ခံနေရကြောင်း ပါရှိပါတယ်။
ဤကြေညာ ချက် စာတမ်းတွင် ဤပြဿနာအခက်အခဲ မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေမှု တွင် ဝဟာဘီ သက္က်ဖီးရီးများ ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ပါဝင်နေကြောင်း ၊ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နည်းတူ ဝဟာဘီ အစွန်းရောက် များ၏ လုပ်ရပ်ကိုလည်း မမေ့ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပါရှိပါတယ်။
ဤအစွန်းရောက် ဝဟာဘီများသည် ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေး အထောက်အပံ့ ဖြင့် အငြိုးအတေးရှိလာရန် နှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာအား မုန်းတီး ရန်လိုလာအောင် ပြုခဲ့ ပြီး ကမ္ဘာ့ ပေါ် ရှိ မွတ်စလင်မ် ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊မည်သည့် ဘာသာဝင် ကိုမှ မသနား မညာတာ ခဲ့ကြောင်း တစ်ဖက်တွင်လည်း ဇီယွန်ဝါဒီများ (အစ္စရေးအစိုးရ ) ၏ လှည့်ကွက် ၊ကစားကွက်များကြောင့် အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက် ရန် အကြောင်းခံများများကို ဖြစ်စေပြီး မွတ်စလင်မ်များ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အကြား ပြဿနာများ မလိုမုန်းတီးမှုများ ၊ အငြိုးအတေးများကို ဖြစ်စေကြောင်း ပါရှိပါတယ်။
မဂ်ျမ ယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ ဘိုက်(သ) (အ.စ) မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေညာ ချက် စာတမ်း အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သေစေရန် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုနေသည့် အနောက်နိုင်ငံများ ၊ မောက်မာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရှိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် များ ကို တိုက်ခိုက်မှု အသစ်တဖန် ပြန်လည်စခဲ့ပါသည်။
ဤမဇ်လူးမ် (အဖိနှိပ်အရက်စက်ခံ) လူမျိုးစု ရှိုဟင်ဂျာ များသည် မြန်မာနိုင်ငံသား၊မြန်မာလူမျိုး မဟုတ် သည့် အကြောင်းပြချက် ဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် မှု ရာဇဝင်မှု ကျူးလွန်မှု အောက်တွင် ရှိနေပါသည်။
ဤရာဇဝတ်မှုကို ကျူးလွန်ရာတွင် အစွန်းရောက် စစ်သွေး ကြွ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး စစ်တပ် နှင့် မြန်မာ အစိုးရ မှလည်း ပူးပေါင်း ကူညီခဲ့ပါသည်။ ၊ဤအတွက် မဇ်လူးမ် မွတ်စလင်မ်များ အသတ် အဖြတ်ခံရပါသည်။မွတ်စလင်မ်များ ၏ အိမ်များ ၊ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ ၊ ဈေးဆိုင်များ မီးရှို့ အဖျက်စီးခံရပါသည်။ ထူးဆန်းသည့် အကြမ်းဖက် ရက်စက် လူမဆန်မှုများ နှင့်အတူ နေအိမ်များ မှ မောင်းထုတ်ခံနေရခြင်းခံရပါသည်။နောက်ဆုံး တရားဝင် စာရင်းဇယားများ အရ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သတင်းတပတ် အတွင်း အယောက် ၄၀၀ သေဆုံးခဲ့ပြီး ၅နှစ်တာ ကာလ အတွင်း ရာနှင့်ချီပြီး တိုက်ရိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၊သို့မဟုတ် ပင်လယ်အတွင်း ထွက်ပြေး အောင် အဓမ္မ ပြုခြင်းကို ခံရ၍ ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။ အမောင်း ထုတ်ခံရ သည့် မွတ်စ လင်မ်များ၏ အရည်အတွက်မှာလည်း သိန်းနှင့်ချီ ရှိပါသည်။
မဂ်ျမ ယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ ဘိုက်(သ) (အ.စ) အနေဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး တွင် အရေး ပါအရာရောက်သည့် လက်ရွေးစင် မွတ်စလင်မ် များ ရာနှင့်ချီပြီး အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်နေသည့် အဖွဲ့ ဖြစ်သည့် အလျှောက် ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားများကို အောက်ဖော်ပြ အချက်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အာရုံ စူးစိုက်စေလိုပါသည်။
၁။ မည်သည့် ဘာသာမဆို သာင်ဟီးဒ် (တစ်ပါးတည်း အရှင်ကို လက်ခံခြင်း ) ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား နှင့် အချစ်မေတ္တာ နှင့် လူသားအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ပူးပေါင်းနေထိုင်ရမည်ကို အခြေခံ ထားပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် မည်သည့် အုပ်စု မဆို ၊ အစိုးရမဆို လူသားများကို သတ်ဖြတ်မှု အတွက် ခြေလှမ်းမည် ဆိုလျှင် မည်သည့် ဘာသာတရား ကို မဆို သက်ဝင်ယုံကြည်သူဟု ကြွေး ကျော်မည်ဆိုလျှင် လိမ်ညာမုသားဆိုသူသာ ဖြစ်ပေမည်။
၂။ တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက် မြို့သူ မြို့သားများ၏ ရပိုင်ခွင့်မှာ နိုင်ငံတိုင်း ရှိ ပြည်သူလူထုများ အတွက် ထင်ရှား ပေါ်လွင်နေသည့် ဘသာဝအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ တကာအကြား အလေးထားသဘောတူထားသည့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အစိုးရ တစ်ခု အနေဖြင့် ပြည်သူလူထု အချို့ မှ တစ်ချို့ အား တရားဝင် နိုင်ငံသား အဖြစ် လက်မခံ လျှင် လည်း ၎င်းတို့ကို သတ်ဖြတ်ပိုင်ခွင့် မီး ရှို့ခွင့် မောင်းထုတ်ပိုင်ခွင့် မရှိချေ။
၄။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် မြောက်များစွာသောကမ္ဘာ နိုင်ငံများတွင် ပြောင်းရွှေ့ လာသူများ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များကို လက်ခံနေရာပေးနေပါသည်။ ထူးဆန်းဖွယ်ကောင်းသည်မှာ မြန်မာ အစိုးရ အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ တစ်မြေတည်း နေလာသူ မိမိ၏ ပြည်သူ လူထုကိုယ်ပင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၊မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုသည့် အကြောင်းပြချက် ဖြင့် လူမဆန်စွာ ငြင်းဆို သတ်ဖြတ်နေပါသည်။
၅။ ဤအကြားစစ်သွေး ကြွ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နည်းတူ သက္က်ဖီးရီးများ ၊ ဝဟာဘီများ ၏ လှုပ်ရှားမှု ကိုလည်း မမေ့ ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဤအစွန်းရောက် ဝဟာဘီများသည် ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေး အထောက်အပံ့ ဖြင့် အငြိုးအတေးများဖြစ်လာရန် နှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာအား မုန်းတီး ရန်လိုလာအောင် ပြုခဲ့ ပြီး ကမ္ဘာ့ ပေါ် ရှိ မွတ်စလင်မ် ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊မည်သူကိုမှ မသနား မညာတာ ခဲ့ချေ။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ဇီယွန်ဝါဒီများ (အစ္စရေးအစိုးရ ) ၏ လှည့်ကွက် ၊ကစားကွက်များကြောင့် အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက် ရန် အကြောင်းခံများများကို ဖြစ်စေပြီး မွတ်စလင်မ်များ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အကြား ပြဿနာများ မလိုမုန်းတီးမှုများ ၊ အငြိုး အတေး များကို ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
၆။ အမေရိကန် အစိုး နှင့် အခြား အင်အားကြီး နိုင်ငံများ သည်လည်း မွတ်စလင်မ် အစွန်း ရောက် အနည်းငယ် ကြောင့် ဖြစ်သည့် ရက်စက်မှုများ ကို ကမ္ဘာသူ၊ကမ္ဘာသားများ ထံ နားကွဲမတတ် သတင်း ထုတ်လွှင့်နေပါသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု နေသည့်ရာဇဝတ်မှု နှင့်ပတ်သက်ပြီးရေငုံနှုတ် ပိတ်နေပါသည် (သို့မဟုတ်) အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိချေ။ လုပ်နေကြအတိုင်း အချည်းနှီ ဖြစ်သည့် စကားများ ၊ နှစ်ဖက်ချွန် လုပ်ရပ်များကိုသာ ပြုနေပါသည်။
၇။ အစ္စလာမ်မီ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ မွတ်စလင်မ် အစိုးရများ ကို မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုလိုသည်မှာ - လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုကို တားဆီး နိုင်ရန် မြန်မာအစိုးရ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ကို ဖိအား ပေးကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ် ခါမေနာအီ အနေဖြင့် မိမိ ၏ ဟဂ်ျမိန့်ခွန်းတွင် အတည် ပြုမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ (( ရက်စက်ညှဉ်းပန်း မှု အောက်တွင် ရောက်နေသည့် လူနည်းစု မွတ်စလင်မ် များ ထိုနည်းတူစွာ မဇ်လူးမ် မွတ်စလင်မ်များ အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသားကာကွယ်မှု ပြုပေးရန် အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ၏ ခေါင်းဆောင်များ အစ္စလာမ့် ကမ္ဘာ ၏ လက်ရွေးစင် နိုင်ငံရေး သမားများ ၊ဘာသာရေး သမားများ အတွက် သမိုင်းပေးတာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ))
၈။ မြန်မာ အစိုးအား ဤ ပြစ်မှုများ၏ မကောင်းသည့်အကျိုးဆက်ကို သတိပေးလိုပါသည်။ နှစ်ဖက် စလုံး (ရှိုဟင်ဂျာများ ၊ရခိုင်လူမျိုးများ ) အကြား ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ဆွေးနွေး မှုများ ကိုယ်ကျင့် တရား နှင့် နိုင်ငံတကာစံ ချိန်စံ ညွှန်းဥပဒေများဖြင့် ဖြေရှင်းပေးဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ တောင်းဆို အပ်ပါ သည်။
၉။ ထိုနည်းတူစွာ လွတ်လပ်မှု ကို မြတ်နိုးသူများ ကမ္ဘာ မွတ်စလင်မ်များ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ စောဒက တက်သည့်အသံများ ကို အသွင်အမျိုးမျိုး ဖြင့် ကမ္ဘသူ၊ ကမ္ဘာသားများ ၏ နားသို့ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည်။ဤသို့ဖြစ် ဘာသာရေး အမည်ခံပြီး ရက်စက် သတ်ဖြတ်မှုများ ကို တားဆီးရန် အတွင်းစိတ် နိုးကြားမှု ကို ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်စေ နိုင်ပါသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရဟ် ဟဂ်ျ အာယသ်တော် အမှတ်၄၀ တွင်အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ထားပါသည်။
الَّذينَ أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلّا أَن يَقولوا رَبُّنَا الله وَلَولا دَفعُ الله النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَهُدِّمَت صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذكَرُ فيهَا اسمُ اللَّهِ كَثيرًا وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزيز. ﴿سوره حج، آیه ۴۰﴾
မဂ်ျမ ယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ ဘိုက်(သ) (အ.စ)
ရှဲဟ်ရီဝဲရ်လ ၁၄ ရက် အီရန်သက္ကရာဇ် ၁၃၉၆
စက်တင်ဘာ လ ၅ ရက် ခရစ် သက္ကရာဇ် ၂၀၁၇ခုနှစ်
အာယာသွလ္လာဟ် ဘရူဂျရ်ဒီး ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပ ကွမ်းမြို့ ။ ။ Photo
June 19, 2019 - 11:18 PM
သုတေသနဆိုင်ရာ နှင့် နည်းပညာမှလူကြီး တို့သည် အာယာသွလ္လာဟ် ဆာဖီဂွလ်ပိုင်ဂန်နီ တို့တွေ့ဆုံ ။ ။ Photo
June 19, 2019 - 11:03 PM
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရန် ဘန်ကောက်သွားမည်
UPDJC အလွတ်သဘော အစည်းအဝေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ
June 19, 2019 - 10:48 PM
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဗီယက်နမ် ဒုဝန်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
June 18, 2019 - 10:56 PM
လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အစိုးရအသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်သုံးစွဲမည်ဟု သမ္မတပြောကြား
June 18, 2019 - 10:47 PM
ကနေဒါမှာရှိသော မွတ်စလင်မာန် ပြည်သူများအတွက် ဟေဂျဘ်ဆောင်းခြင်း ကိုတားမြစ်ခြင်း ဥပဒေကြမ်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ ။ ။ Photo
June 18, 2019 - 10:33 PM
ကဘရ် ဂျန္နတ်သိုလ် ဗကီးအ် ဖြိုဖျက်ဆီးခြင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ အတွက် ဘန်ဂလို ရှီအာများ ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ် ။ ။ Photo
June 18, 2019 - 10:16 PM
သားအိမ်ကင်ဆာကို …ကုသပေးနိုင်တဲ့ ….သဘာဝဆေး (ရှားစောင်းလက်ပက်)
June 18, 2019 - 9:45 AM
ငုံးဥနဲ့တွဲဖက်ပြီး လုံးဝမစားသင့်သော အရာများ
June 18, 2019 - 9:38 AM
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေ နိုင်ငံအတွက် ကြီးမားသည့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ဟု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ သတိပေး
June 17, 2019 - 11:38 PM
ဆာလ်ဂျူကီကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်အား ရဇာဝီဂေါပကမှ သမ္မတအားပေးအပ် ။ ။ Photo
June 17, 2019 - 11:28 PM
ကဘရ် ဂျန္နတ်သိုလ် ဗကီးအ် ဖြိုဖျက်ဆီးခြင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ အတွက် လန်ဒန်ရှိ ဆော်ဒီသံရုံးများ၏ရှေ့ တွင် ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ် ။ ။ Photo
June 17, 2019 - 11:13 PM
တရားမျှတမှုနှင့် အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီကို မန္တလေး၌ ဖွဲ့စည်း
June 17, 2019 - 10:57 PM
မင်းပြားမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် အေအေတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ကျဆုံးမှုရှိ
June 16, 2019 - 10:41 PM
ယီမင် လူထုအားလိုအပ်နေသော သွေးကိုလှူဒါန်း ။ ။ Photo
အစိုးရသက်တမ်းသုံးနှစ်အတွင်း ပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံမှု အားနည်းဟု ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀န်ခံ
June 16, 2019 - 10:11 PM
အီရန်နိုင်ငံမှရေနံများ ဆက်ဝယ်ချင်ဟု ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ပြော
June 16, 2019 - 5:16 PM
ထရန့် အီရန်ကို ပေးသည့် စာ ၏ အခြေအနေ မှန် ပြ ကာတွန်း
June 16, 2019 - 5:08 PM
ထရန့် ဆိုသူဟာအဖြေ တစ်ခုခု ပို့ရမည့်အထိအဆင့်ရှိသူမဟုတ်ပါ /ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်အမေရိကန် နှင့်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ချေ
June 16, 2019 - 4:55 PM
ဆဒ်ကာပေးနည်း အသစ် နှင့် အဟောင်း ကွာခြားပုံ ၊ ကာတွန်း
June 16, 2019 - 12:00 AM
အာဆီယံ အစည်းအဝေး ညီလာခံ ရူဟာနီ ဦးဆောင်တက်ရောက် ။ ။Photo
June 15, 2019 - 11:54 PM
မွတ်စလင်များနှင့် မွတ်စလင်မဟုတ်သူများ အစ္စလာမ်မိတ်ဆုံ ညစာစားပွဲပြုလုပ်ကျင်းပ ။ ။Photo
June 15, 2019 - 11:42 PM
အင်အားကြီးနိုင်ငံများ အပြုသဘောမဆောင်လျှင် ၂၀၁၅ နျူစာချုပ်ကို မလိုက်နာတော့ဟု အီရန်ပြော
June 15, 2019 - 11:23 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလိုမရှိကြောင်း စာရွက်များ မန္တလေးမြို့ပေါ် ဖြန့်ဝေ
June 15, 2019 - 11:20 PM
ကြက်ဥအစိမ်းစားရင် ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိတာ သေချာလား ?
June 15, 2019 - 11:13 PM
ဝေဖန်ခံနေရသော တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်နှင့် အင်းစိန်စုပေါင်းရာဇ၀တ်ရုံးစီမံကိန်းများ ပါဝင်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ လျာထားဘတ်ဂျက်က
June 14, 2019 - 11:48 PM
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ထိရောက်အောင်မြင်မှ မိုင်းလုံးဝကင်းရှင်းအောင် လုပ်နိုင်မည်
June 14, 2019 - 11:29 PM
မရ်ဟွမ် အာယာသွလ္လာဟ် မိုဟကေက် အတွက် ဖတ်ရွတ် ဆုတောင်း အခမ်းအနားကွမ်းမြို့ ။ ။ Photo
June 14, 2019 - 11:18 PM
ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ရဟ်ဘဲရ်တို့ တွေ့ဆုံ ။ ။ Photo
June 14, 2019 - 10:57 PM
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အစီရင်ခံစာ လွှတ်တော်ကို တင်သွင်းတော့မည်
June 13, 2019 - 10:34 PM
ကဘရ် ဂျန္နတ်သိုလ် ဗကီးအ် ဖြိုဖျက်ဆီးခြင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ အတွက် ကွမ်းမြို့ တွင် အဇာဒါရီပြုလုပ် ။ ။ Photo
June 13, 2019 - 10:20 PM
နောက်ဆုံးအေမာမ်အား အမြန်ဆုံးဖူးပွင့်ရန် စောင့်မျှော် ဒိုအာယေ သဝါစိုလ် ဖတ်ရွတ်ခြင်း ဂျမ်ကရန်းမက်စ်ဂျဒ် ။ ။ Photo
June 13, 2019 - 10:05 PM
ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ယခုလအတွင်း ထပ်မံကွင်းဆင်းမည်
June 13, 2019 - 9:49 PM
မန်မာဆယ်ကျော်သက်များ၏ ထက်ဝက်ခန့် အသက် ၁၄ နှစ် မတိုင်ခင် အရက်စသောက်နေ
June 12, 2019 - 4:43 PM
အာယာသွလ်လာဟ် ဆာဖီဂွလ် ပိုင်ဂန်နီ နှင့် စေတနာဝန်ထမ်း လူမှုကယ်ဆယ်ရေး ခေါင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ။ ။Photo
June 12, 2019 - 4:33 PM
အာယာသွလ်လာဟ် စ္စသာနီ၏ကိုယ်စားလှယ် နှင့် အာယာသွလ်လာဟ် ဂျဝါဒီ အာမိုလီတို့တွေ့ဆုံ ။ ။Photo
June 12, 2019 - 4:18 PM
ပြန်လည်အသက်ဝင်ရန် လိုအပ်နေသည့် အပစ်ရပ်စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်
June 12, 2019 - 4:03 PM
တရုတ်နိုင်ငံကို မြန်မာဆန် တန်ချိန် ၁ သိန်း အမြန်ဆုံးတင်ပို့ရန် လိုအပ်နေ
ဂါဇာ ပါလက်စ်တိုင်း မှ ကယ်ဆယ်ရေး လူငယ်ကွယ်လွန် ဂျနာဇာ အခမ်းအနား ။ ။ Photo
June 11, 2019 - 8:22 PM
သောကြာဂျွန်မာ နမာဇ်ဖတ်ပေးသူးယှဟီးဒီ ကာဇီရူန်း အတွက် အထိမ်းအမှတ် ။ ။ Photo
June 11, 2019 - 8:01 PM
June 11, 2019 - 7:37 PM
အေမာမ်အလီ(အ.စ)ရောင်ဇာတော်တွင် ဟဇရတ်သေဇဟ်ရာ(စ.အ)၏နေရာကို ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းနောက်ဆုံး အဆင့်ရောက်ရှိ ။ ။Photo
June 10, 2019 - 11:50 PM
ကာဇက်စတန်တွင် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွား ။ ။Photo
June 10, 2019 - 11:28 PM
ဒီချုပ်အစိုးရလက်ထက်နေပြည်တော်၌ ဆန္ဒပြမှု ၄၇ ကြိမ်ရှိ
June 10, 2019 - 11:18 PM
စစ်ဘေးရှောင်များခိုလှုံနေသည့် ပေါက်တောပြင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို စစ်ဆေးရန် စစ်တပ်က ဝိုင်းထား
June 10, 2019 - 11:02 PM
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟမ်းဘတ်မြို့ တွင် အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ) အတွက် နှစ်(၃၀)မြောက် အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ ။ ။ Photo
June 9, 2019 - 10:54 PM
အစ္စလာမ်မစ် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ၏ ညီလာခံ ကျင်းပ အီရန်နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ ။ ။ Photo
June 9, 2019 - 10:37 PM
ပြည်သူအပေါ်မောက်မာသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မထည့်ဟု NLD ပြော
June 9, 2019 - 10:18 PM
သမ္မတနှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်မည်
June 9, 2019 - 10:01 PM
သဘာဝဘေး ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်ရေး အသင့်ရှိကြရန် ဒုသမ္မတ တိုက်တွန်း
June 8, 2019 - 8:15 PM
သူရဦးအောင်ကို ဝန်ကြီးတာဝန်မှ နုတ်ထွက်ရန် တိမ်းရှောင်နေသည့် ဦးဝီရသူပြော
June 8, 2019 - 8:05 PM
သြစတြီးယားမြို့ တော်တွင် အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ)၏ လူလောကမှနှုတ်ဆက်ထွက်ခွါသည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ ။ ။ Photo
June 8, 2019 - 7:57 PM
အစ်ဖဟန်းမြို့ ဟရမ်မေ မဟ်ဒီ အစ်ဟာကီးရန်းနှင့် ဂျဝါဒ် မိုဟမဟ်ဒီ တွင် ယှဟီးဒ်ဒီး များ၏ နှစ်ပတ်လည် နေ့ ။ ။ Photo
June 8, 2019 - 7:35 PM
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်ထံ ၀မ်းမြောက်ကြောင်းသ၀ဏ်လွှာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပေးပို့
June 7, 2019 - 6:40 PM
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီထောင်မယ့်သူတွေ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နောက်ဆုံးထားလျှောက်ရမယ်
June 7, 2019 - 6:29 PM
ဟမ်းဘတ်အစ္စလာမ်၏ဌာနတွင် အီးဒ်စအီးဒ်ဖေသ်နေ့မှ မြင်ကွင်းပုံများ ။ ။ Photo
June 7, 2019 - 6:17 PM
အီးဒ်စအီးဒ်ဖေသ်နေ့မှ ဟရမ်မေ ဟဇရတ်သ်အဘာစ်(အ.စ) ရောင်ဇာမြင်ကွင်းပုံများ ။ ။ Photo
June 7, 2019 - 5:59 PM
ဦးဝီရသူအား ဖမ်းဆီးရန် တရားဝင်အကြောင်းမကြားထားဟု ကရင်ပြည်နယ် လုံ/နယ်ဝန်ကြီးပြော
June 6, 2019 - 7:02 PM
နမားဇ်အီးဒ်ဖေသ် ကရ်ဘလာမြို့ တွင် ဖတ်ရွတ်နေပုံများ ။ ။ Photo
June 6, 2019 - 6:49 PM
နမားဇ်အီးဒ်ဖေသ် ဟရမ်မေ အေမာမ်အလီ(အ.စ) ရောင်ဇာမြင်ကွင်း ။ ။ Photo
June 6, 2019 - 6:34 PM
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရသည် မြေရောင်းပြီး အကျိုးအမြတ်ရှာသည့်အစိုးရမဟုတ်ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော
June 6, 2019 - 6:16 PM
အခွန်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်အတည်ပြု
June 5, 2019 - 6:35 PM
ဂျမ်ကရန်းမက်စ်ဂျဒ်တွင် နမာဇ် အီးဒ်စအီးဒ် ဖေသ်ရ် ဖတ်ရွတ်ခြင်းမြင်ကွင်း ။ ။ Photo
June 5, 2019 - 6:18 PM
လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်သေဆုံးသည့် အရပ်သားခြောက်ဦး၏နာရေး မင်းပြားသုသာန်၌ ပြုလုပ် အရပ်သားသေဆုံးမှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရ
June 5, 2019 - 6:10 PM